Istanbul Tehran Break 3 Travel malaza indrindra mpiavaka | RayHaber | raillynews
HomeIZAO TONTOLO IZAOAZIA98 IranIstanbul Tehran 3 Ilay mpandeha malaza indrindra
09 / 01 / 2020 98 Iran, AZIA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, Airports, Highway, Tire Wheel Systems, Headline, TORKIA
fomba malaza indrindra hivezivezana eo amin'ny istanbul sy tehran
Rehefa mitsangantsangana any Moyen Orient ianao dia azo antoka fa handeha any Istanbul miaraka amin'ny faritra manodidina ary mandany andro vitsivitsy ao. Tiorkia sarobidy ny fitsidihana dia ny hoe Istanbul no hany tanàna. Be dia be kokoa mba ho hitan'ny manodidina Torkia, fa ny ankamaroan'ireo mpizaha tany no mitsambikina ny ankamaroan'izy ireo. Na izany aza, te-handany ny andro fialan-tsasatra ianao amin'ny farany, ary angamba ianao mikasa ny hitety tanàna roa na telo na firenena any amin'ny fotoana mitovy. Istanbul sy Tehran, Iran sy Torkia no toerana malaza ho an'ny fizahan-tany. Misy fomba 3 malaza indrindra hahatratrarana Tehran avy any Istanbul.
Ny fomba tsotra indrindra nefa lafo indrindra mba hahatongavana any Tehran avy any Istanbul dia amin'ny fiaramanidina. Ny sidina mivantana dia ataon'ny zotram-piaramanidina Tiorka lehibe. Manomboka amin'ny $ 160 ny vidin'ny tapakila mandritra ny dia iray, miankina amin'ny vanim-potoana iray. Manodidina ny 3-4 ora ny sidina.
Fitaterana iray azonao ampiasaina mba hahatongavana any Tehran ny bus. Mampalahelo fa tsy misy fiara fitateram-bahoaka mivantana avy any Istanbul, ka tsy maintsy mandeha mankany Ankara aloha ianao ary mandehana any an-drenivohitra Iraniana hitady orinasa bus izay miasa any. Ny vidiny dia eo amin'ny $ 100 amin'ny fomba iray. Mandeha mihoatra ny 30 ora ny dia ary zara raha mahazo aina tsara amin'ireo karazany 3 atolotra.
Afaka tonga any Tehran ianao amin'ny fiaran-dalamby avy any Istanbul. Ny mpandeha dia mahita fitaterana lafo vidy indrindra ary azo alain-tànana amin'ny fiaran-dalamby. Ny dia toy izany dia mety ho mandany fotoana fotsiny raha ny lavitra no mahazo tombony. Misy antony marobe hifidianan'ny olona ny lamasinina amin'ny fomba fitaterana hafa mandritra ny dia. Ny iray amin'ireny dia ny seza lehibe niova ho fandriana amin'ny alina ary ny fiononana mandritra ny dia lavitra izay azonao atelemana fa tsy hipetaka amin'ny seza misy fiaramanidina mizotra ekonomika. Transasia Express anarana nomena ao Torkia sy Ankara manana lalana mampitohy niaraka Lake Van sy Tehran. Ny dia dia misy 3 traikefa samihafa. Izy ireo dia misy fitsangatsanganana roa amin'ny lamasinina ary sambo iray hafa. Ankoatr'izay, ny fiaramanidina avy any Istanbul mankany Ankara dia omen'ny lamasinina haingam-pandeha. Ny mpandeha dia misafidy ny fitsangatsanganana lamasinina miaraka amin'ny Transasia Express noho ny traikefany. Ny mpandeha mandeha eny ambony sambo dia tonga lafatra amin'ny fijerena ireo zava-misy mahaliana, ny fomba fijery tena tsara ary ny ranon'ny Lake Lake, hihaona amin'ny olona mahaliana, ireo olona eo an-toerana mahafinaritra sy ny mpizahatany za-draharaha, ary koa mankafy ny fahalalahana sy fiadanan'ny natiora. Hamarino ny tapakila azo ampiasaina eto (ny Transasiatra) ary miomàna amin'ny fitsangatsanganana vaovao.
Ny toeram-pialan-tsambo malaza indrindra any Amerika
Examsnap Niezaka naneho ny antony mahatonga ny mari-pahaizana Cisco ho malaza
Nakan'i Iran ny Istanbul ho ohatra ao amin'ny Subway Tehran
1 tapitrisa dolara 50 tapitrisa Euros ao amin'ny tetikasan'ny metro metro Tehran sy Tabriz any Alemanina…
Sarintany ao Tehran Metro
72 isaky ny ora miaraka amina fiaran-dalamby ...
Tehran manantena ny dingana avy ao Yerevan ho an'ny lalàn'i Iran-Armenia
Ny Tehran - tetikasa fananganana tetikasa Mashhad Line dia hanatsara an'i Shina
Ny orinasan'ny Shinoa dia manamarika ny fifanekena momba ny fanarenana an'i Mashat ao Teheran
Nosokafana ny fiarandalamby Nakhichevan-Tabriz-Teheran-Mashhad
İsa Apaydın Manatrika ny fihaonana UIC-RAME any Teheran
TAHRAN- Ankara dia niala tao Muş.
Tehran dia vonona ho amin'ny fananganana làlana ao Armenia ary miandry loharanom-bola
Fifandraisana amin'ny bisy mankany ary avy any Istanbul Tehran
Ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina Istanbul Tehran
Sidina Istanbul Tehran
Fiaran-dalamby Transasia Express